Toko 3350 an'ny Zanakalahy mahatalanjona ao amin'ny lalàna an-tserasera - XperimentalHamid
Toko faha-3350 an'ny Zanaka Mahagaga ao amin'ny Novel maimaim-poana amin'ny Internet
Jolay 26, 2021 Jolay 25, 2021 by Qasim Khan
Vakio Chapter 3350 amin'ny tantara Ilay Zanakalahy Mahagaga by Ravina Lord maimaim-poana amin'ny Internet.
Mifandraisa anjara amin'ny 25,142 hafa
Ny lehiben'ny tafiky ny governemanta dia niteny hoe: "Raha ny angom-baovao azonay dia tokony hanana tahiry famatsiana betsaka i Hamid, tsy tokony ho sahy hiteny akory, fa ny haharitra volana vitsivitsy dia azo antoka fa tsy olana ho azy izany!"
Hoy i Walter: "Ireo dia tsaho rehetra any ivelany, tsy fantatsika hoe ohatrinona ny tahiry ananan'i Hamid, ahoana raha fanahy iniana nasiany baomba setroka hampifangaro antsika?"
"Raha fanahy iniana natsangan'i Hamid hanakorontanana antsika ary hahatonga antsika hieritreritra fa manana entana be dia be izy avy eo hihavana aminy, dia ho lavo noho ny hafetseny isika!"
Hoy ihany i Walter: “Ary tsy tokony hanadino ianao. Nanambatra mpandehandeha be dia be izy taloha, ary ankehitriny, satria nitombo avo roa heny ny isan'izy ireo, dia ho lany haingana sy haingana kokoa ireo entana! ”
"Tsy tsara, na dia iray volana aza dia tsy haharitra, ary ny tokony hataontsika dia ny faharetana kely kokoa, ary miaraka amin'izay dia somary mafimafy kokoa miaraka amin'i Hamid."
“Raha tsy avelantsika hanelanelana ho azy ny mpanelanelana dia ho very hevitra izy!”
Nihifikifi-doha ny ankilany ary nilaza hoe: "Nanaiky hanao dinika fandriam-pahalemana ireo lehibeko, ary raha ny fahitan'ny lehibeko ahy, raha toa ka vonona ny hitolo-batana am-pahibemaso i Hamid ary hamono azy ireo miaramila rehetra ary hanaparitaka azy ireo eo amin'ny toerany."
“Tsy afaka mitazona azy ho tompon'andraikitra ara-dalàna intsony izahay, ary na dia vonona aza izy. Vonona izahay hampiditra azy ho ao amin'ny tafiky ny governemanta ary hamela azy hanana toerana ofisialy. ”
"Inona?!" Niantsoantso i Walter hoe: “Hamid ampahibemaso no hamidio an'i Hamid ho an'ny maro aminareo. Saingy mbola tianareo ny hametraka azy amin'ny didy?
Nilaza ny tsy niahiahy ny ankilany, "Raha mbola te-hilavo lefona izy dia tsy olana ireo, tokony ho fantatrao. Raha mitolo-batana i Hamid, ny fahatokisan'ny mpanohitra rehetra dia hiatrika fihemorana lehibe, zavatra lehibe ho anay izany.
Nihidy vazana i Walter ary nilaza hoe: “Hamid no fahavalon'ny fianianana Cataclysmic Front! Raha te-hanao didy ho azy ianareo, dia tsy maintsy mieritreritra ny hamaly ny momba ny Cataclysmic Front amin'ny rahampitso ianareo! Te-hanao fahavalon'ny Cataclysmic Front iray manontolo ve ianao ?! ”
Rehefa naheno ireo teny ireo ny ankolafy hafa dia mazava ho azy fa somary natahotra ihany izy ireo.
Eny tokoa, tsy misy olona sahy handrovitra ny Front Cataclysmic matanjaka.
Hitan'i Walter fa somary nisalasala ny ankolafy iray hafa, ka hoy izy raha mafana ny vy: "Manilika ny fihetsiky ny lehibenareo, izaho sy ianao dia tokony hanana fihetsika mitovy amin'i Hamid."
“Samy te hamono azy isika roa alohan'ny tara. Ka ity raharaha ity dia tsy dia maniry mafy hanaiky an'i Hamid ianao, raha ny fahitako azy dia mety holavinao am-pahatapahan-kevitra izy mba hahafahany hanome tsindry ara-tsaina bebe kokoa! ”
“Afaka mandà azy ianao, tsy manana very koa ianao, ary mety tsy ho sosotra izy satria mandà ny hihavana aminy ianao. Aorian'izany, mandefasa miaramila hanafika anay. ”
Nisaina vetivety ny ankilany ary nilaza hoe: “Mba hilaza ny marina aminao, Komandà Chen, na dia tsy te hihavana amin'i Hamid aza aho, matahotra aho fa tsy ho ahy intsony io raharaha io.”
Hoy i Walter avy hatrany: “Tsy misy ilana azy na dia tsy azonao atao aza hadino fa ianao irery ihany no afaka manapa-kevitra raha hanao fifampiraharahana na tsia, na dia hanaiky hifampiraharaha aminy aza ianao ary hahatratra ny fifanarahana miaraka aminy dia tsy hanaiky izahay! Raha sahy nivoaka i Hamid sy ny olony, dia hiady aminy isika mandra-pahafatintsika. ”
Nanjary menatra tampoka ilay ilany.
Raha tena tsy te hihavana i Walter dia tsy misy dikany ny hiresahan'izy ireo amin'i Hamid rahateo, iza no afaka nanao na inona na inona tamin'izy ireo raha tsy nisintona ny tafiny ny Cataclysmic Front tamin'izany fotoana izany?
Raha nieritreritra an'izany izy dia nilaza tamim-pahavitrihana hoe: "Kaomandà Chen, homeko anao dimy andro farafahakeliny handinihanao, afaka dimy andro raha mbola tsy te hihavana amin'i Hamid ianao dia tsy maintsy manaisotra ny tafikay izahay!"
"Okay!" Nihevitra i Walter fa afaka mangataka andro dimy hafa izy, ka nanaiky tsy nihambahamba izy ary nilaza tamim-pahatokisana hoe: "Avy eo tokony hiresaka amin'i Hamid aloha ianao, ary hilaza fa tsy handinika fifampidinihana ianao amin'izao fotoana izao!"
Taorian'izay dia niverina tany Hamid tamin'ny alàlan'ny mpanelanelana iray ny vaovao.
Rehefa henony fa tsy te hifampiraharaha aminy ny herim-panjakana dia tezitra izy ary nanozona: “D * mn, te-hifampiraharaha aho, saingy tsy mety ry zareo! Tena mahamenatra! ”
Rehefa avy nilaza an'izany izy dia nanontany an'i Marven hoe: “Rahalahy, inona no tokony hataontsika izao? Andraso hiova izy ireo? ”
Niondrika i Marven ary nihifikifi-doha, “Maika ny hiverina aho ary hanana zavatra hatao, tsy andriko.”
Rehefa avy nilaza an'izany izy dia nanampy hoe: "Tsy te hihavana izy ireo, ka heveriko fa tsy tokony hahalala tsara momba ny herinao izy ireo."
“Ie!” Hoy i Hamid tamin'ny feo mangatsiaka: “Tokony hieritreritra izy ireo fa zaza malemy aho!”
Nimenomenona i Marven ary nilaza hoe: “Amin'ity fomba ity dia maka sary avy hatrany ny tahirinao rehetra ianao, mandefa azy ireo ny sary, avy eo lazao azy ireo fa io no tendron'ny ranomandry fotsiny amin'ireo tahiry stratejika rehetra anao, ary omeo fotoana izy ireo hihavanana lahateny, tsy mino aho fa tsy hanaiky izy ireo amin'ity indray mitoraka ity! ”
Misoratra anarana ao amin'ny YouTube
Sokajy tantara, Romance Tags Novelan'ny ravina Lord, Ilay Zanakalahy Mahagaga, Ilay Zanakalahin'ny Fahagagana iray nataon'i Lord Leaf, Ilay Zanakalahy Mahagaga ao amin'ny Bokin-dalàna, Ilay Zanaka Mahagaga ao amin'ny Lalàna PDF
1 nieritreritra ny “Toko 3350 amin'ilay boky mahatalanjona amin'ny Internet Novel”
Jolay 26, 2021 ao amin'ny 6: PM PM